စက်သုံးဆီဈေး မြင့်တက်ခြင်းနှင့် ကုန်ကြမ်း ပစ္စည်းများ ဈေးတက်ခြင်းကြောင့်ဟုဆိုကာ မော်လမြ? - Yangon Media Group
စက်သုံးဆီဈေး မြင့်တက်ခြင်းနှင့် ကုန်ကြမ်း ပစ္စည်းများ ဈေးတက်ခြင်းကြောင့်ဟုဆိုကာ မော်လမြ?
စက်သုံးဆီဈေးနှုန်း မြင့်တက်ခြင်းနှင့် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ ဈေးတက်နေခြင်းများကြောင့် မွန်ပြည်နယ် မော်လမြိုင်မြို့၌ ရောင်းချနေသော ရေသန့်လုပ်ငန်းများမှ ထုတ်လုပ်သော ရေသန့်ဘူးများ အောက်တိုဘာ (၄) ရက်မှစတင်၍ ဈေးနှုန်းမြင့်တက်မည်ဟု မြို့ပေါ်၌ကြိုတင်အသိပေး ကြေညာနေကြောင်းသိရသည်။
ယခုအခါ မော်လမြိုင်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ရေသန့်လုပ်ငန်းစက်ရုံများမှ ရေသန့်ဖြန့်ဝေရောင်းချသော မော်တော်ယာဉ်များ၏ရှေ့တွင် ဗီနိုင်းချိတ်ဆွဲ၍ ၂ဝလီတာ အဖြူတစ်ဘူးကျပ် ၅ဝဝ၊ ၂ဝ လီတာအပြာ (အကြည်) တစ်ဘူးကျပ် ၅၅ဝဖြင့် အောက်တိုဘာ ၄ ရက်မှ စတင်ရောင်းချမည်ဖြစ်ကြောင်း စားသုံးသူများသို့ မေတ္တာရပ်ခံစာချိတ်ဆွဲ၍ ကြိုတင်အသိပေးနေကြကြောင်းသိရသည်။
”လက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ ၂ဝ လီတာအဖြူတစ်ဘူးကိုကျပ် ၄ဝဝ၊ အပြာ(အကြည်) တစ်ဘူးကိုကျပ် ၄၅ဝ နဲ့ ရောင်းနေတာပါ။ တက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ စက်သုံးဆီဈေးတက်တာရယ်၊ တခြားကုန်ကြမ်းပစ္စည်းတွေအားလုံးကလည်း ဈေးတက်တာရယ်၊ ပြီးတော့ အစိုးရကအလုပ်သမားတစ်ဦးကို အနိမ့်ဆုံးတစ်နေ့လုပ်ခ ကျပ် ၄၈ဝဝ သတ်မှတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရယ်၊ ကျွန်တော်တို့လည်းတက်ရတာပါ။ ဒါတောင် ကျွန်တော်တို့ တက်လိုက်ရတဲ့ တစ်ဘူးကိုကျပ် ၁ဝဝ ဆိုတာက စရိတ်ကာမိရုံပဲရှိပါတယ်။ ဈေးမတက်ဘဲနဲ့ တော့ ကျွန်တော်တို့ ရေရှည်မလည်ပတ်နိုင်ပါဘူး” ဟု မော်လမြိုင် မြို့နယ် ရေသန့်လုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ တွဲဖက်ဘဏ္ဍာရေးမှူး ဦးကျော်ဝင်းတင်က ပြောသည်။
မော်လမြိုင်မြို့နယ်တွင် ရေသန့်စက်ရုံ ၁၈ ရုံရှိပြီး လက်ရှိစက်ရုံ တစ်ရုံလျှင်ဝန်ထမ်းဦးရေ ၂ဝ မှ ၃ဝ အတွင်းရှိကြောင်းသိရသည်။ ရေသန့်ဘူးဈေးနှုန်းတက်ရန်အတွက် မော်လမြိုင်မြို့နယ် ရေသန့်လုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့အနေဖြင့် စက်တင်ဘာလအတွင်းက အစည်းအဝေးသုံးကြိမ်ပြုလုပ်၍ညှိ နှိုင်းဆွေးနွေးကာ ဈေးနှုန်းပြင်ဆင်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။